निर्मला हत्या प्रकरण : प्रहरी र नेताको नाटक चलिरहेको छ
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले सिंगो देशलाई दुःखी बनाएको छ। अहिलेसम्म अपराधी नसमातिँदा हामी स्तब्ध छौँ। विभिन्न आयोग बनेका छन्। जाँचबुझ समिति बनेका छन्। आयोगहरू घटनस्थलमा गएका छन्। सरकारले पनि कति वटा आयोग बनाइसक्यो।
तर, अहिलेसम्म अपराधी समातिएको छैन। यो अचम्मको कुरा हो। निर्दोष मान्छेलाई समातेर जबर्जस्ती अपराध कबुल गर्न लगाइँदा प्रहरी प्रशासन जनताको आँखामा छारो हाल्न लागिपरेको जस्तो देखिन्छ।
सुरक्षा निकायप्रति जनतामा जुन सुरक्षा भावना हुनुपथ्र्यो, त्यो ठाउँ शंकाले लिएको छ। यो दुःखको कुरा हो। प्रहरीले पोस्टर च्यात्नु, ‘समाचार नलेख’ भन्नुले घटनालाई दबाउन खोजेकोे जस्तो लाग्छ। तर, जनताले बुझेका छन्। अहिलेका जनता सचेत छन्। सामाजिक सञ्जालमा र यत्रतत्र सरकारको विरोध भइरहेको छ।
>>> निर्मला हत्या प्रकरण : ‘निर्मलालाई न्याय’का योद्धा
यस घटनामा न्यायको प्रत्याभूति भएको छैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति भएकोे छैन। त्यसैले निर्मला हत्याकाण्ड अरू हत्याकाण्डभन्दा फरक छ। सुरक्षा दिने निकाय प्रहरी हो। न्याय दिने निकाय न्यायपालिका हो। सुरक्षा दिने निकायले नै प्रमाण नष्ट गर्छ भने सुरक्षा पाउने कुरै भएन। प्रमाण नष्ट गरेको बारेमा अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जबाफ प्रहरीबाट आएको छैन। प्रहरीले किन प्रमाण नष्ट गर्यो ?
अहिले डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। त्यो पनि प्रहरीकै ल्याबमा ! जाँचबुझमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरीकै प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण गर्नुले झनै शंका गर्ने ठाउँ राखेको छ। प्रहरी र नेताको चाला हेर्दा नाटक गरेजस्तो लाग्छ। ढाकछोपको प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।